Fahaingoana fanamboarana vato fametahana | Lingshou
Tools: Ireto fitaovana manaraka ireto dia tokony ho hita eo alohan'ny fananganana. Matetika izy ireo ary afaka mahita azy ireo amin'ny fananganana fivarotana fitaovana na fivarotana entana.
Ilay basy mitsingevana
Ny fizotran'ny fananganana:
1.Mandeha fikarakarana ny fikorontanana amin'ny rindrina amin'ny rindrina ary simba ny tapany;
2. Mampiasà blender afangaro amin'ny sary hoso-doko voalohany sy latabatra;
3. Ampiasao amin'ny alàlan'ny fananganana miaraka amin'ny borosy boribory;
4.Mandrafitra ny fanamboarana lambam-bidy am-pitiavana rehefa maina ny fanalahana, saron-tava ny velaran'ny fananganana misy kasety masking araka ny habeny takiana;
5. Ampiasao amin'ny loko vita amin'ny baoritra vita alohan'ny hatody miaraka amin'ny borosy roller, avy eo ampidiro ny felaka loko miaraka amin'ny basy mielatra avy amin'ny rindrina amin'ny halavany 30-50cm, fa ny 10-20cm eo an-javan'ny rindrina. (Tsara ny mandefa ny flakes loko amin'ny tananao, fa ho azonao antoka fa zaraina tsara.)
6. Mampiasà borosy mikosoka hanesorana ny flakes loko izay tsy raikitra aorian'ny fananganana 24 ora. Avy eo, esory ny paompy masking. Takao ny paompy masking eo akaikin'ilay lalantsara mba tsy hisy fiantraikany amin'ny farany vita.
7.Spray topcoat miaraka amin'ny basy mitam-basy mandrapaha-akanjo palitaomaina tanteraka ny ing mba hisorohana ny latsaka mianjera ary koa ny hahatratrarana ny vokatry ny famonoana afo, porofon'ny rano, asidra ary fanoherana alkali ary antipollution.